Thursday August 13, 2020 - 20:57:03 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay heshiis rasmi ah oo ay gaareen dowladda Imaaraatka Carabta iyo maamulka Yahuudda.
Trump oo shir Jaraa'id ku qabtay magaalada Washington ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay dowladdiisu martigelin doonto munaasabadda heshiiska ay ku kala saxiixanayaan labada dhinac.
Dhinaca kale R/wasaaraha Yahuudda iyo dhaxal sugaha Sacuudiga Max'med Bin Zaayid ayaa iclaamiyay in ay dib usoo ceshadeen xiriirkii diblumaasiyadeed ee ka dhaxeeyay islamarkaana ay iska kaashan doonaan ladagaallanka waxa loogu yeero Argagaxisada.
Qodobada labada dhinac ay ku heshiiyeen waxaa kamid ah in Yahuuddu ay joojiso mashruucii ay deegaannada Daangalbeed ugu biirinaysay maamulkeeda taas bedelkeedna dowladda Imaaraatka Carabta ay aqoonsanayso Yahuudda ayna la yeelanayso xiriir diblumaasiyadeed oo rasmi ah.
Max'med Bin Zaayad dhaxal sugaha Imaaraatka wuxuu sheegay in Yahuudda iyo UAE ay yeelan doonaan iskaashi ballaaran oo meel walba taabanaya.
R/wasaaraha Yahuudda oo isna hadlayay ayaa aad ugu mahad celiyay Trump wuxuuna Imaaraatka Carabta ku tilmaamay saaxiibo dhab ah, Netenyaahu wuxuu carabaabay in tani ay tahay dowladdii sedaxaad oo katirsan Jaamacadda Carabta oo caadiyaysa xiriirka kala dhaxeeya Yahuudda.
Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in Afartii sanadood ee lasoo dhaafay ay Imaaraatka iyo Yahuudda lahaayeen cilaaqaad qarsoodi ah balse hadda sare loo qaaday xiriirkaas lana caalamiyeeyay.